शनिबार, ०२ असोज २०७८, ०४ : ४८
विश्वको सांस्कृतिक, आर्थिक र सञ्चारको राजधानी हो, न्युयोर्क सहर ! अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको महत्वपूर्ण केन्द्र पनि हो न्युयोर्क सहर ! न्युयोर्क अमेरिकाकै अत्यन्त बाक्लो जनघनत्व भएको प्रमुख सहर हो । यहाँ जताततै भीड सल्बलाइरहेको देखिनु यहाँका मानिसहरुलाई सामान्य हुँदो हो, तर नवआगन्तुक भने भीडमा अलमलमा परेका भेटिन्छन् ।
एक हुल अधिकारविहीन महिलाहरुले..पुरुषसत्ता र सरकारविरुद्ध नाराजुलुस गरे..बालुवाटार, संसद्भवन, महिला मन्त्रालय घेरे, राष्ट्रपति कार्यालय पुगे, विज्ञप्ति निकाले, चक्काजाम गरे, थाल र नाङ्लो ठटाए, सरकारलाई दुत्कारे ।
प्रेमलाई विविध तरिकाले परिभाषित गर्ने प्रयास गरिएको यो उपन्यास प्रेमका विषयमा पढ्ने र पढाइने कलेजका बारेमा हो । हुन त प्रेम बिना यो संसारमा केही पनि छैन र पनि प्रेमका बारेमा गम्भीर हुने ठाउँ छैन । कलेजमा पनि यो पढाइँदैन । प्रेमबाहेक सबै विषयमा कलेजमा पढाइन्छन् ।
‘कति एंग्रिन्न सक्छेस्, तेरो रिस त कुकुरमा १२ सिठ्ठी लगाएर गलाउनु पर्ने ?’ सातपटक फोन गर्दा पनि नउठाएपछि रोशनले सुष्मालाई च्याटमा पठाएको सन्देश । फेसबुकको म्यासेन्जर, भाइबर, इमोमा पनि अनलाइन देखिँदासमेत सुष्माले रोशनलाई कुनै प्रतिक्रिया नदिएको १४ घण्टा बित्यो ।
दुखियाका पक्षमा लेख्न सकूँ
म्यान बुकर पुरस्कारका अध्यक्ष तथा पुरस्कारका निर्णायक अनि आलोचक र समीक्षक सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु । म पुस्तक विक्रेतालाई पनि धन्यवाद दिन्छु, जसले मज्जैले मेरो पुस्तक बेचे । मलाई अचम्मै गरी उदेक किन लाग्थ्यो भने मैले लेखेका अन्य तीन पुस्तकमध्ये अधिकांश पुस्तक किनेर मैलेजस्तै बुझ्ने गरी पढ्नेहरु पनि रहेछन् !
मास्टर आज तनाबमा छ । संधै ऊ कलेजको गेटबाट छिर्नासाथ कलेजका सञ्चालकलाई नमस्ते गथ्र्यो । सञ्चालकले मुस्कानका साथ नमस्ते फर्काउँथ्यो । तर आज अचम्म भयो । सञ्चालकले फिका नमस्ते फर्कायो, मुस्कान बिनाको । उसको दिमागमा नानाथरी कुरा खेल्न थाले । छोराको स्कूलको बिल सम्झ्यो, घरबेटीलाई दिनुपर्ने भाडा सम्झ्यो